Britian iyo Nederland oo Soomaaliya ka caawinaya tayeynta adeegyada socdaalka ee dalka – Radio Daljir
Seteembar 6, 2013 4:20 b 0
Muqdisho, September 6, 2013 – Dowladdaha Holland iyo Britian ayaa dalka Soomaaliya ka taageera doona qorshe cusub oo lagu horumarinayo socdaalka dalka Soomaaliya. Sidaasi waxay labbada dowladdood ka sheegeen kulan shalayto ka dhacay Muqdisho oo khuseeyey arrimaha socdaalka dalka.
Mr. Neil Wigan Safiirka Britian u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa sheegay in mashruuca lagu tayeynayo socdaalka Soomaaliya ay ugu talo-galeen lacag dhan 2.5 Milyan oo Dollar, taas oo ay dowladda Britian sii marsiinayso Hay?ada IOM.
Dowladda Britian sidoo kale waxay bixinaysaa qalab kala duwan oo lagu ogaanayo dadka safraya iyo halka marayaan, sidoo kale qalabka ayaa ah mid sahlaya in la ogaado dadka sida sharci darrada ah ku safraya, gaar ahaan Argagixisada.
Waaxda socdaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in tayeynta socdaalka Soomaaliya ay ka caawinayso dowladda in la helo, awood buuxda oo lagu ogaan karo isku xirnaanshaha safrayaasha iyo hay?adaha socdaalka ee dalka.